Covid-19 : Hiroso amin’ny fijerena sy fampiasana ireo vaksiny mahatohitra ny « variant » i Madagasikara
vendredi, 26 mars 2021 10:00
Nisy ny fikaonandoha notanterahana tao amin’ny lapam-panjakana Iavoloha, ny alakamisy 25 Martsa 2021, niarahan’ny Académie Nationale de Médecine de Madagascar (ANAMEM) sy ny fitondram-panjakana notarihin’ny Filohan'ny Repoblika, Andry Rajoelina.
Nisongadina nandritra ny dinika ny fiarovana ny aina sy ny fahasalaman’ny vahoaka Malagasy izay anisan’ny soatoavina voarakitra ao anaty Lalampanorenana.
Nifantoka tamin’ny fandinihana ireo karazana vaksiny misy sy ny vokatra aterak’izany eo amin’ny fahasalamana ny fivoriana.
Zava-dehibe ny fandraisana fanapahan-kevitra mifandraika amin’ny toe-java-misy sy ny “variant” misy eto amin’ny firenena ary ny fivoaran’ny valanaretina.
Mila mitsinjo indrindra koa isika ny fepetra raisina manoloana ny mety ho fiakaran’ny tahan’ireo mitondra ny tsimokaretina izay hitranga afaka volana vitsivitsy mandritra ny vanimpotoanan’ny ririnina.
Noresahana ihany koa ny fomba fandraisana an-tanana ireo marary sy ny fomba nentina nitsaboana sy nisorahana ny valanaretina Covid-19.
Nitondra ny fomba fijery ara-tsiantifika kosa ireo Profesora avy ao amin’ny Akademia mahakasika ny fivoatran’ny valanaretina sy ny vaksiny efa misy manerantany.
Nandroso soson-kevitra ny mpikambana ao amin’ny Akademia amin’ny tsara hirosoan’ny firenena amin’ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 mifototra amin’ny fandalinana ara-tsiansa.
Rehefa nanome ny toromarika sy ny torolalana ny ANAMEM dia toy izao manaraka izao ny fanapahan-kevitra noraisina :
2-Tapaka fa safidy ny vakisiny ary tsy tokony atao an-tery.
3-Ny vaomiera siantifika miaraka amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran’ny fampianarana ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa no handrafitra ny dingana tsy maintsy hatrehina ahafahana manatanteraka izany.
4- Ny fampiasana ny vokatra Malagasy CVO Plus ao anatin’ny “protocole de traitement” amin’ny fitsaboana sy fisorohana ny Covid-19 dia mbola mitoetra ary mitohy hatrany.
5-Ny fitandreman’ny tsirairay avy no zava-dehibe hahafahana miaro ny tena, ny fianakaviana ary ny firenena manoloana ny fihanaky ny valanaretina. Ilaina noho izany ny fanarahana an-tsakany sy an-davany ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana rehetra mipetraka eto Madagasikara.